Tsy Nankatoavin’ny Antenimiera Ny Fanalan-jaza Ao Shily · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Janoary 2018 8:18 GMT
Tamin'ireo vato 61 manohana, nanapa-kevitra tsy hankatoa ny fanalàn-jaza ny antenimieram-pirenena ao amin'ny kongresy Shiliana ary nanambara azy io ho “tsy azo ekena”. Ny vato 21 kosa dia manohitra ary ny 3 tsy nanan-kevitra.
Quemarlasnaves (ES) nanoratra momba ny hevitra demaokratika izay nahakasika ny fanapahan-kevitra:
Ny fanapahan-kevitry ny filohan'ny antenimiera, miaraka amin'ny fanohanan'ny ankamaroan'ny mpikambana, dia tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana ary maneho ohatra ratsy izay mety hanimba tanteraka ny fomba amam-panao demaokratika.
Mitohy ny taratasy ary any amin'ny farany, manoratra ny fomba fijerin'izy ireo ara-pitsarana momba ny toe-draharaha izy ireo:
Ny zavatra farany, amin'ity fanambarana ity, dia afenina amin'ny vahoaka ny tena antony mahatonga ny fanapahan-kevitra. Ara-pollitika ny antony marina: manohitra ny tsy fanamelohana ny fanalàn-jaza ny ankamaroan'ny solombavambahoaka ankehitriny. Miezaka mandany fanapahan-kevitra ara-politika ho ara-dalàna izy ireo.
“Izao tontolo izao araka an'i Leal” no lohateny nosafidian'i Rodrigo (ES) mba hanehoany ny tsy fitovian-keviny. Antonio Leal (ES) no filohan'ny antenimieram-pirenena. Nanohy nanazava izy hoe:
Tsy manohana ny fanalan-jaza aho, kanefa, manohitra ny tsy fahafahana miady hevitra momba izany ihany koa, ka tsy mba afaka niresaka zavatra sasantsasany isika, satria tsy vonona isika, satria tsy fotoanany izao sns.
Mikasika ny fanaintainana nateraky ny adihevitra, Pablo (ES) nanoratra hoe:
Tsy azo ekena ny hirifiry mahita zavatra manomboka toy ny hevitra tsara mankany anaty fanariam-pako. Handeha hilaza zavatra mikasika ny fanalan-jaza aho, saingy nanelingelina ahy ny fahatsapana tsy nampoizina sy vao haingana indrindra mikasika ny fomba fijery. Mbola mandratra izany. Manantena aho fa sitrana isika.
5 ora izayAngola